Dambudziko rechirwere cheropa risina hutano hwakanaka riri kuvhiringa hupenyu hwevanhu vakawanda vasingazive kuti vane chirwere che Anaemia.
Anemiya chirwere chisingataurwe nezvacho nguva zhinji, asi chirwere ichi chiri kuvhiringa hutano nehupenyu hwevanhu vakawanda munyika.
Mumwe wevanhu vane chirwere ichi, Amai Mercy Jonasi Ching’anga, vanoti vakashamiswa pavakaudzwa kuti chirwere chavo che anemiya chakanga chakomba zvokuti vaifanirwa kuendeswa kuchipatara zvechimbi chimbi.
Semunhu aive asina mari, Amai Ching’anga vanoti vakazowana mumwe chiremba asingabhadharise mari yakawanda, uyo akavabatsira mushure mekunge aongorora ropa ravo.
Amai Ching’anga vanoti vakaudzwa kuti hutano hwavo hwaiva husisina kumira zvakanaka zvokuti vaitofanirwa kupiwa mubhedha kuchipatara kuti vatutsirwe ropa asi zvipatara zvehurumende hazvisi kushanda semakare kubudikidza neCovid19.
Amai Ching’anga vanoti kubva pavakatanga kunwa mishonga yavakanyorerwa nachiremba, vave kunzwa zviri nani asi dambudziko riripo nderekuti zvimwe zvinhu zvavanofanirwa kudya zvinowedzera ropa nekukurumidza, zvinodhura.
Nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Josephat Chiripanyanga, vanoti chirwete che anemiya, icho chinokonzera kushomeka kweropa, chinokonzerwa nezvinhu zvakawanda nokudaro panotofanirwa kuvhenekwa zvakanyanyisa kuti vaone kuti chii chaizvo chiri kuvhiringa ropa mumuviri wemunhu.
Dr Chiripanyanga vanoti zvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti munhu ane chirwere ichi, kucheneneruka kwemaziso, rurimi nemukati memaoko.
Josephat act 5
Dr Chiripanyanga vanoti chimwe chinoratidza zvakare kuti munhu ari kupererwa neropa ihana inorova zvakanyanyisa kana wafamba zvinhanho zvishoma uye nekugara munhu akaneta.
Dr Chiripanyanga vanoti zvinhu zvinonyanya kusveta ropa mumuviri zvinosanganisira vakadzi vanorasikirwa neropa rakawandisa panguva yavo yokutevera nezvimwe zvirwere zvinenge HIV/Aids nechirwere cherurindi.
Mutevedzeri wemukuru anoona nazvematenda asingatapuriranwe mubazi rehutano, Dr Justice Mudavanhu, vanoti anemiya harisi denda ringanzi rakatekeshera munyika.
Dr Mudavanhu vanoti vanhu vanofanirwa kuvhenekwa ropa ravo kuzvipatara nemakiriniki nguva nenguva vachiitwa “full blood count” iyo inovheneka mamiriro ehutano hwemunhu muropa iroro.
Ongororo yakaitwa nebazi rehutano mugore 2017 yakaratidza kuti chirwere ichi chinonyanya kubata vana vadiki nemadzimai akazvitakura anenge asingadye zvakanyanya chikafu chinovaka miviri.
Imwe ongororo yakaitwa neWorld Bank muna 2016 inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana zvemadzimai akazvitakura, aive nechirwere che anemiya.